Ukuba ngumveleli, lixesha elide lokuphila-i-Geofumadas
Ukuba ngumveleli ngumntu obomi bonke.
NgoJuni, 2014 Topography
Uthando lukaKen Allred lwezolimo-mpahla alukwazi umda, kwaye intshiseko yakhe, kwisifundo esichazwa kumachule njengesilinganiso semathematika, sisasazeka.
UMLA osemhlala phantsi waseSt. Albert akasacingi kabini ngokubonisa amandla aphengululi abaye baphononsa izikhonkwane zabo ezilula. Kwiminyaka emininzi kamva kamva, ezi zinto zibalulekileyo zibhekwa njengabakishi bexesha elide. Izikhumbuzo zezobuqhetseba zichaza imida kazwelonke nakwamanye amazwe, kodwa kwinqanaba elincinci, ichaza imida yomhlaba ngamnye yomnini. Ukubaluleka kwayo kubuyela emva kwexesha lokuqala abantu bemi kwindawo ethile kwaye baqala ukuphikisa malunga nokuba ngubani ongumnikazi weliwa ngalinye.
«Sebenza kwi Ubaluleka bezolimo zezolimo Isenokufumaneka ebhayibhileni, kwincwadi yeDuteronomi yeTestamente Endala, apho ubunini bomhlaba buqwalaselwa. Abahloli baseCanada abanjengoSamuel de Champlain okanye uJacques Cartier babengabavavanyi ngokwenene ababedala iimephu kunxweme. Kumasipala wale mihla, imida nepropathi eqinisekileyo yomnini wepropathi, echaza ukuba ngubani na ongumnini womhlaba kunye nawo nawuphi na umbandela okuwo, zimiselwa yi-topography, utshilo u-Allred.
Ukuthabatha kwakhe kwi-Topography kwaqala iminyaka eyi-50 eyadlulayo emsebenzini wekhefu, ngexesha lehlobo, ngelixa befunda ubunjineli kwiYunivesithi yase-Alberta.
"Kwakuyimfuneko ebalulekileyo yabafundi bezobunjineli. Ndineqela labaphandi abasebenza emngceleni osenyakatho we-Waterton National Park. Ndabona umcebisi we-Ottawa eze kwaye afumene umkhondo womakishi womthi owakhonze njengommakethi womda; Le nyaniso yandivuyisa, kuba ndayiqonda ukuba ukuba yintlaphographer, umntu makabe ngumcebisi kwicandelo, "utsho uAllred.
Nangona abaninzi abahlali baseSt. Albert bekhumbula u-Allred ngeengxoxo zakhe zezopolitiko njengeCommunity Councilman kunye nelungu leSigqeba sase-Alberta, emva kwelo hlobo ehlobo e-Waterton, u-Allred waba ngumcebisi wekarhulumente kwaye nguye wokuqala u msebenzi
Inzala yakhe kweso sifundo yaqala ukunyusa ukuba, njengento yokuzonwabisa, wenza isifundo kwimbali yezolimo. Allred wachitha ixesha elininzi lokuzikhangela izikhumbuzo ezidumile ezifana nekhumbuzo elidala le-300, iMason-Dixon Line e-United States okanye umda we-Stelae ohlala usekufuphi kweDama lase-Aswan kuMlambo iNayile, nangona ukuba yachithwa ngxondorha yiYiputa yamandulo.
"Abaninzi bamanqaku bamandulo basemisebenzi yobungcali," utsho u-Allred ngoxa esitshengisa iifoto zesikhumbuzo samandulo, kuquka nekopi yesikhumbuzo saseBhabhiloni.
Ilitye leBabiloni lexesha leKassite elisecaleni le-1700 ligqitywe ngombala omdala uchaza ukuba ngubani onomhlaba kwaye ukuba le nto yisisombululo kumbango womda, u-Allred uthi.
"Oku kubonisa indima abaphenyi abanayo kunye nokubaluleka kokubeka imida yokulungisa amabango ommelwane nontanga yabo," utsho.
Umgaqo oqhelekileyo wezophulo-mhlaba kukuba isikhumbuzo sinye. Lo mgaqo nguwo ohlala eqinile kwimpikiswano yomda.
Iimyalelo ezichaziweyo okanye kunye namaxwebhu abhaliweyo awanalo igunya elifanayo neyona nto ibalulekileyo. Nangona isigqibo sangempela asiyilo umgca wonyani kumhlaba obonisa ukuba ipropati yomntu iqalisa kwaye iphela enye.
Kwimeko yeMason-Dixon Line, umzekelo, i-criterion yokuxilongwa kwe-1700 yukuthi uKumkani waseNgilani wayemisele ubunini belizwe likaWilliam Penn ngokubhekiselele kwi-40 parallel. Nangona kunjalo, uphando lwangaphambili olwenziwe aluzange lubekwe kuloo.
Nangona kunjalo, xa isigqibo somda sahamba yonke indlela eya enkundleni, amanqaku asekwe kwimiqulu yokuqala yagcinwa. Oku kwakuthetha ngasemva ukuba, ngokusekelwe kumgca ochazwe kwi-survey ye-Mason-Dixon yophando, i-Philadelphia yayisePennsylvania kwaye kungekhona eMargan.
"Umgaqo ofanayo unyanisekileyo kwimida yehlabathi, njenge-49 efanayo," utsho uAllred. "Umda waseCanada - eMntla waseMelika awukho ngqo kwi-49 parallel."
Ekufutshane nekhaya lakhe, e-1861, umbingeleli uAlbert Lacombe wanikela apha, kubahlali bokuqala belizwe eSt. Albert, inkqubo yokumakisha kwiindawo ezikuloo mlambo esekelwe kwindlela yaseQuebec. Ikholoni nganye yafumana umgama omncinci womhlaba owahlambelelwa nguMlambo waseSturgeon.
Kwi-1869, umphenyi ogama linguMeja Webb wathunyelwa nguRhulumente waseCanada ukuba ahlolisise imimandla yomlambo ehlala eMlambo oMlambo eManitoba, usebenzisa indlela ye-polygonal yokulinganisa indawo. ULouis Riel waphonononga inkqubo yenkqubo yophando eyenziwa nguMajeb Webb waza wammisa.
U-Allred uthumele umculi uLeevo Lavoie waseSt. Albert ukupenda umzobo obonisa le mzuzu wembali.
"Xa uRiel wayeka ukulandelelana kwenkqubo yophando lwezolimo, yatshintsha i-geography yasentshonalanga yeKhanada," kusho u-Allred.
Inkqubo esetyenziselwa uphando lwezobugcisa eManitoba yayiyindlela yokuthengisa. I-Webb yayidingekile ukuphakamisa iipasela zomhlaba kwii-800 iihektare ngenzame yokukhwabanisa abantu abahlala ngasentla kumda we-US. AmaMerika aphakamisa uluntu lwabo kwindawo ye-600 iihektare.
"Bazama ukutsala abahlali ngokunikela ilizwe elingaphezu kwamaMerika," kusho u-Allred.
Inkqubo yepulazi yasemhlabeni nayo yaba yingxaki eSt. Albert. Kwi-1877, abavandlali abahlanu abaholwa nguMhloli oyiNtloko uMnuz Deane bathunyelwa e-Edmonton baya eSt Albert.
"Abahlali be-mestizo bachasene nomsebenzi weqela lophando kuba urhulumente wesigqeba wayefuna ukwahlula ilizwe libe ngamacandelo," kutsho uJean Leebody, umbonisi womboniso kwiMbali yoLondolozo lweMveli ehlala phantsi, oye waphanda ingxaki yezobuhlanga eSt. Albert.
"Ingxenye yenkathazo kukuba i-mestizos ayifumananga ngokusemthethweni izibonelelo. Babenemaphepha kuphela ngaphandle kwexabiso elisemthethweni. E-St. Albert, abahlali be-mestizo babesongela ukuba bayeke umsebenzi xa i-pipeline yomhlaba iguqulwa, iphoqa i-Oblates kunye no-Father Leduc ukuba bangenele. "
Abahlali be-mestizo babukele uDeane kunye neqela lakhe lilinganisa iSt. Albert ukwenzela ukudala inkqubo yokuhambisa umhlaba ngokubanzi kwaye yaqalisa ukuyika ngenxa yokuba yesaba ukulahlekelwa ilungelo lomhlaba. Ukuba le nto yayibuyiselwa kwakhona, abahlali baxela, ubuncinane iintsapho ezisixhenxe ziza kuba nobunini beli candelo elifanayo lomhlaba. Abanye abahlali bayeza kulahlekelwa ukufikelela kumlambo owawuyimfuneko kakhulu kwezolimo kunye nokuloba. Zonke iindlela, ezihamba ngokufana nale, ziza kuguqulwa.
URhulumente akazange afunde isifundo. Akazange afunde kwizinto ezenzeka eManitoba kwaye ezibangela iingxaki apha naseBatoche eSaskatchewan, "kusho u-Allred.
Ngokufanayo, i-mestizo abahlali baseSt. Albert bayamkela inkqubo yovavanyo lwezobugcisa ngenxa yokuba inkqubo yokusabalalisa engaqhelekanga yabantwana baka-Oblate yabangela ukungavumelani okukhulu.
Amabango e-Territorial ayimicimbi yosuku ngalunye, ngokubhekiselele kwimbali yomlando wendawo ye-Black Robe. Abahlali abatsha bafaka isigxina ekupheleni komhlaba wabo.
Ukubonakala kwabahloli-rhu lumente bazisa imbambano ngaphambili kwaye intlanganiso kawonkewonke yadibana eSt. Albert eya kubakho abantu abavela kwezinye iindawo zomlambo ezibandakanya i-Fort Saskatchewan ne-Edmonton. Iziseko zaphakanyiswa kwaye uBawo Leduc kunye noDaniel Maloney, ohlala eSt. Albert, bathunyelwa e-Ottawa ukuba bayenze isibheno kwimeko, balondoloze inkqubo yokwahlula umlambo eSt. Albert. Baye baphumelela, kwaye ngenxa yoko ipolisi yenkqubo yangoku igcinwe.
«Njengoko isixeko sasikhula, oonongesi bathengisa umhlaba wabo kwaye wawahlulahlulwa. Njengoko isixeko sasisanda, abo babenemilambo yeoli bathengisa izinto zabo; ezi zithengisiwe njengezikwere esinazo ngoku eSt Albert, ”utshilo uLeebody.
Amanqaku omhlaba omdala aphakanyiswe ngabaphathi bezografu asele njengamanqaku omhlaba wepropati ecacileyo kodwa akulula ukuyifumana.
Xa amanzi ephakama okanye ewa, njengoko kunjalo kwiBig Lake, imida iyafuneka isungulwe. Yaye ukuba izityalo zikhula kwiimpawu eziphawulekayo, oku kunokuba nzima ukufumana.
«Esona sixhobo sixabisekileyo somphononongi yifosholo. Ngamanye amaxesha abavavanyi bayimba kwaye bakhangele isangqa esirusileyo apho inqanawa inyibilikileyo kodwa ubukho bokubumba bushiywe lwanele, ”utshilo u-Allred.
Ukuzekelise ubunzima bokufumanisa iziganeko, i-Allred ibonise enye eyenziwa njengophawu kwindlela yophando kwendlela kwaye ibhalwe nge-R-4; Itholakala phakathi kwehlathi lase-White Spruce kufuphi nelitye elikhulu.
"Oku kwasekuqaleni, mhlawumbi luphawu lwesiza somlambo," utshilo.
Ummakishi okwangoku uyisigxina esinombhobho obomvu weplastiki, oboshwe phezulu. Xa i-Allred isusile ama-sheets kunye ne-debris, yafumana uphawu lokuqala lwe-iron. Kwiindawo ezungezekileyo, wafumanisa nokudakumba okukhulu kwihlabathi.
«Ndingafumana uxinzelelo ngoku, kodwa kwicala elingaselunxwemeni lendlela bekuya kufuneka kubekho uxinzelelo ezine ze-intshi ze-12 ubunzulu kunye nendawo ye-18 yesentimitha. Uxinzelelo luphawu olongezelelekileyo lokuba amafama angakhuhli kwezo zinto kwaye ngenxa yoku kuphawulwa kunokuphulukana nazo, ”utshilo.
Iimpawu ezimangalisayo kumsebenzi walabo bahlolisisi bokuqala, abafana noDavid Thompson, benza iimfesane ezingaziwa, ngokuqhelekileyo kwiindawo ezinokungakhuselekanga zelizwe kwaye ziphantsi kweemeko ezidume kakhulu kwemozulu.
«Abavavanyi ngoovulindlela. Kwimeko kaThompson yayingumsebenzi owenziwe ngokujonga iinkwenkwezi. Ayikho enye indawo ekubhekiswa kuyo ngaye, ”utsho u-Allred.
Uhleka ngokukrakra ngcamango yokuhlola ibingxakini.
"Kuninzi kuxhomekeke kwiimpawu zomhlaba kwaye isiqwenga ngasinye sineemida," usixelela.
«Abaphandi kufuneka babelungile kwitrigonometry; Kufuneka babe nokuqonda kwiinkqubo zomthetho nakwezobugcisa kunye neemaphu kunye nejografi. Bafanele ukuba bazazi izinto ezazikho ngaphambili. Itoyitali yimbali ».
Post edlulileyo«Edlulileyo Top 40 Geospatial Twitter
Post Next amafu Point kunye ungqamaniso ne Google Maps - 5 New Microstation V8iOkulandelayo "
Iimpendulo ze-4 "Ukuba ngumveleli, liva lixesha lokuphila"
C. Marshal uthi:
Inomdla !!! !!!!!!!! Ngaba baya kuba neembali zezolimo, eMexico? Nibingelela!
I-FRANCISCO JAVIER IBERLIN DE LA CRUZ uthi:
KUNYE UMSEBENZI UKUBA UKUQHUBEKA UKUPHATHISELWA KWENKQUBO KUNYE KWIMFAMA NGOKUNCEDA NOKUZIPHATHISWA KWEENKQUBO, I-VIDEO NGO KANYE NAKWANYE AMAZIKO.
Ushicilelo lugcwele imbali lubonisa ukubaluleka kombhali
ericsson evela kwinqaba uthi:
papasho e gqwe